No Hot Link Please — MYSTERY ZILLION
No Hot Link Please
April 2009 edited April 2009 in About Forum
စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ပါခင်ဗျ။ ပိုစ့်တွေ ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hot link တွေ ထည့်နေကြတာ အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ဒီမှာ၊ ဒီလင့်၊ ဒါကိုနှိပ် ဆိုတဲ့ စာသားတွေ ကို select လုပ်ပြီး လင့်တွေ ထည့်ထားတာ စာဖတ်သူကို အငိုက်မိသွားစေမယ့် ပုံစံပါ။
Spyware, botnet, malware တွေ အများစုက အဲဒီလို လင့်တွေ ကိုမှားနှိပ်ရာကနေ၊ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ လာအောင်းနေရော။ ပြီးရင် ကိုယ့်ရိုက်သမျှ၊ ကလစ်သမျှ ဟာတွေကို သူ့ရဲ့ သခင်ဆီကို key logger သဘောမျိုးနဲ့ သွားပြနေရော။
မှတ်မှတ်ရရ အင်တာနက် တည်ထောင်သူထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့သူက (နာမည်မေ့သွားပြီး) "ကျနော်ဆို အင်တာနက် စပေါ်ကတည်းက သုံးနေတာပဲဗျ။ အခုထက်ထိ ဘာ virus မှ မထိသေးဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မသိတဲ့ လင့်တွေ ကိုနှိပ်ရင်၊ စိတ်မချရတဲ့ ဖိုင်တွေ ကို သုံးရင်/ဒေါင်းရင် ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ" လို့ အင်တာဗြူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားတယ်။
အကိုပြောတာ ဟုတ်ပါတယ် ဗျာ ။ တစ်ချို ့ဆိုရင် (ဒီမှာ) နှိပ်ပါဆိုပြီး လင့်တွေ ချိတ်ပေးကြတယ် ။ အဲဒါတော ့လုံး၀မကောင်းဘူးဗျ။
Forum စည်းကမ်းချက်ထဲမှာလဲ ပါပါတယ် ။ Link တွေ ကိုထည့်ရင် Code ဖြင့်ထည့်ရန် ဆိုပြီးတော ့ရေးထားပါတယ်။
အခုလို သတိထပ်ပြီးပေးတဲ ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...........။
ဟုတ်ကဲ့ .. မှန်ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ရေးကူးချင်ရင် နည်းနည်းတော့ စိုရမယ်တဲ့ခင်ဗျား .. သိချင်လို့ နှိပ်ကြည့်ရင်တော့ အမှားလည်းရှိနိုင်သလို .. အမှန်လည်း ရှိနိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ .. ဒီမှာတော့ အရမ်းကြီးမဆိုး၀ါးနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် .. ဒီလိုမှမပေးရင်လည်း .. လူကိုယ်တိုင်အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပြီးတော့ပြောရမလိုပါဘဲ .. :d .. ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းကကောင်း၏ တဲ့ခင်ဗျား .. မနှိပ် ခင်ကတည်းက .. လိုတာတွေအရင် ပြင်ထားပေါ့..
In my opinion Battlestar Galactica season1-4dvd is one of the best sci-fi shows ever made. Not only does it haveavery original and compelling premise but it also has some of the best and most original characters of any TV show. Supernatural-Seasons-1-4-DVD As well as this it manages to pull of not only convincing character development but also manages to move the show itself forward atasteady and realistic pace. lost season1-4 dvdThe-X-Files-Seasons-1-9-DVD It has great writers with fabulous plotlines and dialogue. The acting is also some of the best you will find inagenre show of this type. Scrubs-Seasons-1-7-DVD-Boxset Richard Dean Anderson in particular ii am not really into realistic programmes. i watched "hollyoaks" forawhile andalove doctor who season1-4dvd."prison break" thats it. i love programmes like Smallville-Seasons-1-8-DVD-Boxset "Lost-Season-1-4-DVD-Boxset" .Las-Vegas-Seasons-1-5-DVD-Boxset-DVDS ."Buffy-The-Vampire-Slayer-Seasons-1-7-DVD-Boxset" ,24 Hours seasons1-6dvd.The-Wire-Seasons-1-5-DVD.
Experience must be bought !! :D
ဒီဖိုရမ်က လူတွေကတော့ ယုံကြည်ရမယ်ထင်ပါတယ်..:) ....
ဟုတ်ပါတယ်...ဒီဖိုရမ်ရဲ့စည်းကမ်းမှာLink ပေးတဲ့အခါမှာhyper link ထည့်လို့မရပါဘူး....နောက်ပြီး